GADZIRISA WINDOWS GADZIRIDZA YAKADZIKA KANA FROZEN - NYORO
Gadzirisa Windows Gadziridza Yakadzika kana Frozen
Vashandisi varikumhan'ara nyaya iyo iyo Windows Gadziriso yakanamatira kurodha pasi izvo, kana iyo yekuvandudzwa yakatonhora sezvo pasina kufambira mberi kunoonekwa. Kunyangwe iwe ukasiya yako system kurodha pasi yekuvandudza kwezuva rese, icharamba yakaramba yakanamatira, uye hauzokwanisi kugadzirisa Windows yako. Pane zvikonzero zvakawanda zvekuti nei usingakwanise kurodha patsva, uye isu tichaedza kubata imwe neimwe yavo mune iri pazasi gadziriso.
Kuisirwa kweimwe kana kupfuura mawindow eWindows angangonamirwa kana chando kana iwe ukaona imwe yeanotevera mameseji anoramba aripo kwenguva yakareba:
Kugadzirira kugadzirisa Windows.
Usadzime komputa yako.
Kugadziridza Windows kugadzirisa
Ndokumbirawo usadzime kana kusunungura muchina wako.
Kuisa kugadzirisa 3 pa4…
Usadzime komputa yako
Chengetedza PC yako kusvikira izvi zvaitwa
Kuisa kugadzirisa 2 pa4…
Windows yekuvandudza chinhu chakakosha chinoita kuti chokwadi kuti Windows inogamuchira zvakagadziriswa zvekuchengetedza kuchengetedza Komputa yako kubva pakutyora kwakadai senge ichangoburwa WannaCrypt, Rudzikunuro nezvimwe.Uye kana ukasachengeta PC yako kusvika pari zvino, unova panjodzi yekuva munjodzi yekurwiswa kwakadai. Saka pasina kutambisa chero nguva ngatione kuti tingagadzirise sei Windows Kugadziridza Yakabatika kana Frozen nyaya tichirodha pasi zvigadziriso nerubatsiro rwepazasi-rwakanyorwa gadziriso yekugadzirisa.
maitiro ekuita apfuura youtube zera zvirambidzo
Maitiro 1: Mhanya iyo Windows Gadziridza Troubleshooter
Maitiro 2: Ita shuwa Windows yekuvandudza masevhisi ari kushanda
Maitiro 3: Mhanya Sisitimu Dzosera
Maitiro 4: Dzorerazve SoftwareDistribution Folder
Maitiro 5: Mhanya Sisitimu File Checker (SFC) uye Tarisa Disiki (CHKDSK)
Maitiro 6: Mhanya Microsoft Fixit
Maitiro 7: Ita Yakachena Boot
Maitiro 8: Gadziridza BIOS
1. Vhura Control Panel uye tsvaga iyo Dambudziko mubha yekutsvaga kuruboshwe uye tinya pairi kuti uvhure iyo Dambudziko .
2. Tevere, kubva pahwindo rekuruboshwe, pane sarudza Wona zvese.
3. Ipapo kubva kuTroubleshoot computer matambudziko rondedzero sarudza Windows Gadziridza.
4. Tevedzera pa - screen kuraira uye rega iyo Windows Dzokororo Dambudziko rekumhanya
5. Tangazve PC yako uye ona kana uchikwanisa Gadzirisa Windows Gadziridza Yakabatika kana Frozen nyaya.
1. Dhinda Windows Key + R wobva wanyora services.msc (pasina makotesheni) uye rova ​​Enter.
2. Tsvaga mabasa anotevera:
Kumashure Intelligent Transfer Service (BITS)
3. Tinya kaviri pane yega yega uye uve nechokwadi chavo Startup mhando yakagadzirirwa ku TO utomatic.
4. Ikozvino kana chero ehumwe masevhisi ari pamusoro akamiswa, ita shuwa kubaya Kutanga pasi peChinhu Chebasa.
maitiro ekuita ddos ​​uchishandisa cmd
5. Tevere, tinya-kurudyi paWindows Gadziridza sevhisi uye sarudza Tangazve.
6. Dzvanya Nyorera, uchiteverwa neOK uye wozotangazve PC yako kuchengetedza shanduko.
Iyi nhanho yakakosha sezvo ichibatsira kugadzirisa Windows Dzokerera Yakabatikana kana Frozen nyaya asi kana iwe uchiri kutadza kudhawunirodha kana kuisa zvigadziriso, woenderera nenzira inotevera.
1. Dhinda Windows Key + R uye nyora sysdm.cpl ipapo rova ​​pinda.
2. Sarudza iyo Dziviriro yeSystem tab uye sarudza Sisitimu Dzosera.
3. Dzvanya Next uye sarudza chaunoda Sisitimu Dzorera poindi .
4. Tevedza iyo-skrini kuraira kupedzisa system kudzoreredza.
5. Mushure mekutanga zvekare, munogona Gadzirisa Windows Gadziridza Yakabatika kana Frozen nyaya.
2.Zvino nyora inotevera mirairo yekumisa Windows Gadziridza Services uye wobva warova Enter mushure meumwe neumwe:
net mira wuauserv
net mira cryptSvc
mambure ekumira bits
net mira msiserver
3. Tevere, nyora unotevera kuraira kutumidza zita SoftwareDistribution Dhairekita uye wobva warova Enter:
4. Pakupedzisira, nyora unotevera kuraira kuti utange Windows Gadziridza Services uye rova ​​Enter mushure meumwe neumwe:
net kutanga wuauserv
net kutanga cryptSvc
mambure ekutanga mabheti
net kutanga msiserver
1. Dhinda Windows Key + X wobva wadzvanya pa Raira Kukurumidza (Admin).
3. Mirira maitiro ari pamusoro apedze uye kana wapedza, tangazve PC yako.
4. Tevere, mhanya CHKDSK kugadzirisa File System Zvikanganiso .
5. Rega maitiro ari pamusoro apedze uyezve tangazve PC yako kuchengetedza shanduko.
Kana pasina kana matanho ari pamusoro apa akabatsira kugadzirisa Windows Gadziriso yakanamatira dambudziko uye sekupedzisira, unogona kuedza kumhanyisa Microsoft Fixit inoita kunge inobatsira kugadzirisa nyaya.
1. Endai pano uye wozotsikitsira pasi kusvikira wawana Gadzirisa Windows Kwidziridzo zvikanganiso.
2. Dzvanya pairi kurodha pasi Microsoft Fixit kana zvimwe unogona kurodha pasi kubva pano.
3. Kamwe kurodha pasi, tinya kaviri pa faira kumhanya iyo Troubleshooter .
4. Ita shuwa kubaya Yepamberi uye wobva wadzvanya Run semutungamiri sarudzo.
5.Kana iyo Troubleshooter ichinge iine manejimendi maropafadzo; ichavhurazve, wobva wadzvanya pane yepamusoro uye sarudza Nyorera kugadzirisa otomatiki.
6. Tevedza iyo-skrini kuraira kupedzisa maitiro, uye zvinobva zvango gadziridza Windows Gadziridza Yakabatika kana Frozen nyaya.
Dzimwe nguva 3rd party software inogona kunetsana neWindows Gadziriso uye inokonzeresa Windows Gadziriso kuti Inonamatira kana Frozen. Ku gadzirisa iyi nyaya , unofanirwa ita bhutsu yakachena muPC yako uye ongorora nyaya nhanho.
Dzimwe nguva kugadzirisa yako system BIOS inogona kugadzirisa kukanganisa uku. Kuti uvandudze BIOS yako, enda kune yako mamaboard yekugadzira webhusaiti uye utore yazvino vhezheni yeBIOS uye isa iyo.
windows 10 kugadzirisa 1903 yakanamatira
Kana iwe waedza zvese asi uchiri wakanamatira pane USB chishandiso chisina kuzivikanwa dambudziko, ona gwara iri: Maitiro ekugadzirisa USB Midziyo isingazivikanwe neWindows .
Pakupedzisira, ndinovimba une Gadzirisa Windows Gadziridza Yakabatika kana Frozen nyaya , asi kana iwe uine chero mibvunzo, ndokumbira uvabvunze muchikamu chekutaura.
Tsiva PowerShell ne Command Prompt mu Context Menyu muWindows 10
Nzira gumi nembiri dzekuita kuti Google Chrome ikurumidze
Tsiva Powershell ne Command Prompt mu Windows 10 Start Menyu
Gadzirisa Windows 10 Vagadziri Gadziridza kumisikidza kwakanamatira
Ndikwo kana wabudirira Gadzirisa Windows Gadziridza Yakadzika kana Frozen uchirodha pasi zvinyorwa asi kana uchine chero mibvunzo maererano neichi posvo inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
windows 10 password kudzoreredza software
ntoskrnl.exe system uye yakadzvanywa memory disk dhisiki
windows yekuvandudza mubatsiri yakanamatira pa 99
windows runtime broker yakakwira cpu
windows 10 pamba otomatiki inogadziridza
wifi iyo yekugedhi yekumira haisi kuwanikwa